FAMONOANA PÔLISY TELO LAHY :: Naiditra am-ponja ireo olona sivy ambin’ny folo voampanga • AoRaha
FAMONOANA PÔLISY TELO LAHY Naiditra am-ponja ireo olona sivy ambin’ny folo voampanga
Natolotra ny Fitsarana , omaly any Toamasina ireo olona miisa sivy ambin’ny folo voarohirohy namono nahafaty ireo pôlisy miisa telo, tany Fenoarivo Atsinanana, tamin’ny 24 oktobra lasa teo. Vita ny fihainoana azy ireo tao amin’ny Fampanoavana dia avy hatrany natolotra ny mpitsara mpanao famotorana ireo voampanga rehetra. Naiditra am-ponja avokoa izy ireo taorian’izay.
Nifandrombonan’ny zandary sy ny pôlisy misahana ny heloka bevava ny fisamborana sy ny famotorana ireo olona am-polony ireo tany Fenoarivo Atsinanana. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena dia vehivavy no nampirisika ireo andian’olona nitarika tamin’ny famonoana ireo pôlisy telo mirahalahy namita iraka tany an-toerana tamin’io fotoana io. Isan’ireo efa voasambotra ary natolotra ny Fitsarana io vehivavy io. Ankoatra ny fianakavian’ireo pôlisy namoy ny ainy dia nametraka fitoriana tamin’ity raharaha ity ihany koa ny Pôlisim-pirenena.
Raha tsy mbola mivaha ny olana momba ny raharaha Antsakabary, izay maha voarohirohy olon-tsotra maro namono nahafaty pôlisy roa sy pôlisy maro voampanga nandoro trano an-jatony, ka namoizana ain’olona iray tany an-toerana dia miseho indray ity raharaha Fenoarivo Atsinanana ity.